Nandre an’Andriamanitra Nefa Tsy Nino (Jaona 12) | Fiainan’i Jesosy
Naneho Finoana ve ny Jiosy Rehefa Nandre ny Feon’​Andriamanitra?
MARO NO NANDRE NY FEON’ANDRIAMANITRA
INONA NO FOTOTRA HITSARANA NY OLONA?
Niresaka momba ny hahafatesany i Jesosy tao amin’ny tempoly, ny alatsinainy 10 Nisana. Efa akaiky izany ary nanahy izy hoe inona no ho vokatr’izany eo amin’ny anaran’ny Rainy. Hoy àry izy: “Ray ô, omeo voninahitra ny anaranao.” Nisy feo mafy avy tany an-danitra namaly hoe: “Efa nanome voninahitra azy aho, ary mbola hanome voninahitra azy indray.”—Jaona 12:27, 28.
Very hevitra ireo nandre izany. Nisy nihevitra hoe kotroka no ren’izy ireo. Hoy kosa ny hafa: “Nisy anjely niteny taminy.” (Jaona 12:29) I Jehovah anefa no ren’izy ireo niteny. Tsy vao tamin’io no nisy olona nandre ny feon’Andriamanitra, nandritra ny fanompoan’i Jesosy teto an-tany.
Natao batisa i Jesosy telo taona sy tapany talohan’izay ary ren’i Jaona Mpanao Batisa ny feon’Andriamanitra. Hoy ilay feo momba an’i Jesosy: “Io no Zanako malalako, izay sitrako.” Nandre ny feon’Andriamanitra koa i Jakoba sy Jaona ary Petera, taorian’ny Paska taona 32. Niova tarehy teo anatrehan’izy ireo i Jesosy tamin’izay ary hoy Andriamanitra: “Io no Zanako malalako izay sitrako. Henoy izy.” (Matio 3:17; 17:5) Maro kosa no nandre ny feon’i Jehovah niteny, tamin’ity fanintelony ity.
Hoy i Jesosy: “Tsy ho ahy no nahatongavan’izany feo izany, fa ho anareo.” (Jaona 12:30) Nanaporofo ilay feo fa tena Zanak’Andriamanitra sy Mesia nambara mialoha i Jesosy.
Tsy nivadika i Jesosy ka tsy tokony hivadika koa ny olona. Hita amin’ny fiainan’i Jesosy koa fa tena mendrika ny horinganina i Satana Devoly, ilay mpitondra an’izao tontolo izao. Hoy i Jesosy: “Tsaraina ankehitriny izao tontolo izao. Ary horoahina ankehitriny ilay mpitondra an’izao tontolo izao.” Tsy ho faharesena ilay fahafatesan’i Jesosy efa akaiky fa ho fandresena. Nahoana? Hoy izy: ‘Izaho anefa, rehefa hasandratra hiala amin’ny tany, dia hitaona ny karazan’olona rehetra ho amiko.’ (Jaona 12:31, 32) Afaka mitaona ny olona ho aminy i Jesosy noho ny fahafatesany teo amin’ny tsato-kazo, ka lasa misy olona afaka miaina mandrakizay.
Hoy ny vahoaka rehefa nilaza i Jesosy fa “hasandratra” izy: “Renay tamin’ny Lalàna fa haharitra mandrakizay i Kristy, koa nahoana ianao no milaza fa tsy maintsy asandratra ny Zanak’olona? Fa iza izany Zanak’olona izany?” (Jaona 12:34) Efa nahita porofo maro ny vahoaka ary nandre ny feon’Andriamanitra mihitsy. Tsy nanaiky anefa ny ankamaroany hoe Zanak’olona tokoa i Jesosy sady Mesia nampanantenaina.
Efa nilaza i Jesosy tany aloha fa ‘fahazavana’ izy. (Jaona 8:12; 9:5) Hoy izy tamin’ny vahoaka: “Kely sisa no itoeran’ny mazava eo aminareo. Mandehana dieny mbola eo aminareo ny mazava, mba tsy ho resin’ny haizina ianareo. ... Minoa ny mazava dieny mbola eo aminareo izy, mba ho tonga zanaky ny mazava ianareo.” (Jaona 12:35, 36) Niala teo izy avy eo, satria mbola tsy tokony ho faty ny 10 Nisana. Tamin’ny Paska 14 Nisana izy vao ‘nasandratra’ na nofantsihana teo amin’ny tsato-kazo.—Galatianina 3:13.
Rehefa dinihina ny fanompoan’i Jesosy, dia hita fa fahatanterahan’ny faminaniana ilay hoe tsy hino azy ny Jiosy. Naminany i Isaia fa ho jamba ny mason’ilay vahoaka ary ho donto ny fony ka tsy hiverina izy ireo ary tsy ho sitrana. (Isaia 6:10; Jaona 12:40) Mafy loha ny ankamaroan’ny Jiosy ka nanda ny porofo hoe i Jesosy ilay Mpanafaka nampanantenaina, na ilay lalana mankany amin’ny fiainana.
Nino an’i Jesosy tokoa i Nikodemosy sy Josefa avy any Arimatia ary ny olona ambony hafa. Hanao zavatra mba hanehoana finoana ve anefa izy ireo? Sa hiahotra satria matahotra ny ho voaroaka ao amin’ny synagoga na tia “ny voninahitra avy tamin’ny olona”?—Jaona 12:42, 43.
Nohazavain’i Jesosy izay tafiditra amin’ny hoe mino azy. Hoy izy: “Izay mino ahy, dia tsy izaho ihany no inoany, fa ilay naniraka ahy. Ary izay mahita ahy, dia mahita an’ilay naniraka ahy.” Iankinan’ny aina ny fahamarinana notorin’i Jesosy sy nasain’Andriamanitra nampianariny. Afaka nilaza àry izy hoe: “Izay mandà ahy ka tsy mandray ny teniko, dia manana izay mitsara azy. Ny teny nolazaiko no hitsara azy amin’ny andro farany.”—Jaona 12:44, 45, 48.
Namarana ny teniny toy izao i Jesosy: “Tsy araka ny nahim-poko no nitenenako, fa ny Ray izay naniraka ahy no nandidy ahy ny amin’izay holazaiko sy hoteneniko. Ary fantatro fa ny didiny no fiainana mandrakizay.” (Jaona 12:49, 50) Fantatr’i Jesosy fa tsy ho ela izy dia handatsaka ny rany ho sorona ho an’ireo maneho finoana azy.—Romanina 5:8, 9.
Oviana avy no nandrenesana an’Andriamanitra niresaka momba an’i Jesosy?
Iza ireo olona ambony nino an’i Jesosy, ary inona no nety ho nahatonga azy ireo tsy ho sahy haneho ny finoany teo imason’ny olona?
Inona no fototra hitsarana ny olona “amin’ny andro farany”?
Ahoana no nampiasan’Andriamanitra an’i Jaona Mpanao Batisa sy ny anjely mba hampahafantarana fa i Jesosy no Mesia? Ahoana no nilazan’i Jehovah mivantana fa i Jesosy no Mesia?
Hizara Hizara Naneho Finoana ve ny Jiosy Rehefa Nandre ny Feon’​Andriamanitra?